113: Numberka gargaarka deg-dega ah: Fadlan, hana soo wicina hadii aad caafimaad qabtaan. - NorSom News
113: Numberka gargaarka deg-dega ah: Fadlan, hana soo wicina hadii aad caafimaad qabtaan.
Laamaha caafimaadka ayaa sheegtay in kumanaan qof oo su´aalo ka qaba cudurka Corona ay isdaba joog ah ula soo xiriirayeen numberka la numberka gargaarka deg-dega ah ee 113.
Waxeyna sheegeen in numberka 113 dhowr mar khadka laga saaray maalmihii ugu danbeeyay , dadka soo wacay oo kumanaan qof daqiiqadiiba gaarayay owgeed. Taas oo sababtay in kumaan qof oo kale oo gargaar deg-deg ah u baahnaa, ay khadka soo gali waayeen.
Laamaha caafimaadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee soo waca ee numberka 113 ay yihiin dad caafimaad qaba, balse raba inay helaan jawaabaha su´aalo la xiriira cudurka Corona.
Hey´addaha caafimaadka ayaa hada dadweynaha ka codsanayo inaan lasoo wicin telefoonkaas, si si caadi uu khadka ugu soo noqdo numberka 113, loona qaabilo kiisaska xaaladaha deg-degaha ah ee gargaarka caafimaad u baahan.
Hey´addaha caafimaadka ayaa dadka ka codsanayo inay joojiyaan wicitaanka telefoonka 113, hadii aysan jirin sabab halis caafimaad ah oo xiligaas taagan. Waxeyna dadka ka codsadeen inay fursad siiyaan dadka u baahan gargaarka caafimaad ee deg-dega ah.
Xigasho/kilde: Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe 113 eller 116117, dersom de er friske eller har spørsmål om koronaviruset.
Previous articleXulka qaranka Sweden: Ciyaartoyda Talyaaniga ka ciyaara, yeysan noo imaan.
Next articleWadamadan ayaa ilaa hada mamnuucay in “Norwegianku” ay dalkooda soo galaan.